शब्दहरूको बगैचा, टोकियो मा एक अवश्य हेर्नुहोस् यात्रा समाचार
शब्दहरु को बगैचा, टोकियो मा एक देख्नै पर्छ
मारिएला क्यारिल | | के हेर्ने, टोकियो
आज जापान यो केवल सुशी, समुराई वा फुजीसान, यसको पवित्र पहाड र राष्ट्रिय प्रतिमाको लागि मात्र होइन, तर यसको गुणस्तरको लागि पनि परिचित छ। एनिमेटेड चलचित्र र श्रृंखला। एनीमेले लामो समयको लागि संसारलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र वास्तवमा तपाईं नरिता अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा पुग्ने बित्तिकै तपाईंले आफ्नो यात्रा समर्पण गर्ने सम्भावना छ कि ती ठाउँहरू जुन एनिमेसनले संसारभरि चिनिने छ भनेर जान्नको लागि तपाईंले समर्पण गर्नुहुनेछ। पर्यटन नक्शा को प्रस्ताव छ एनिमे र मंगाको बारेमा।
व्यक्तिगत रूपमा एक एनिमे चलचित्रहरू कि म एक समय को लागी सबैभन्दा धेरै मन परेको छ शब्दहरु को बगैचाजापानको सब भन्दा सुन्दर बगैंचामा एक छोटो सृष्टि सेट गरियो Shinjuku Gyo-en। के तपाई जापान जाँदै हुनुहुन्छ? त्यसो भए यो यात्रा गर्न रोक्नुहोस्।
1 शब्दहरु को बगैचा, anime
2 Shinjuku Gyo-en उद्यान
3 Shinjuku Gyoen भ्रमण गर्नुहोस्
शब्दहरु को बगैचा, anime
यो संक्षिप्त छ २०१ anima एनिमेटेड फिल्म जापानीमा कल गर्नुहोस् Kotonoha No Niwलाई यो महान मकोोटो शिन्काई द्वारा लेखिएको र निर्देशित गरिएको थियो र उसको मूल गीत एक अद्भुत चीज हो जुन तपाईंको दिमागमा लामो समयसम्म स्थिर रहनेछ।
मा कथा केन्द्रहरु ताकाओ अकिजुकी नाम गरेको १ year वर्षको केटा जो जुत्ताको डिजाईनर र निर्माता बन्ने सपना देख्छ र ऊसँग अजीब सम्बन्ध छ युकारी युकिनो नाम गरिएको २-वर्षीया महिला। तिनीहरू Shinjuku Gyo-en र मा एक सुन्दर मंडप मा भेट यस सुन्दर पार्क एक सम्बन्ध को दृश्य हुन्छ कि बढ्छ र सबै चीजको बावजूद समात्छ, रहस्य, मौन र उमेर फरक।
भेटघाट बरसातमा रहेको छ। जुन १ मा जापानमा वर्षा beginsतु सुरु हुन्छ जुन एक महिना रहन्छ जहाँ हप्ताका धेरै दिन वर्षा हुन्छन्। ती दिनहरू, ताकाओले सँधै क्लास बिर्सन्छ र बगैचामा जुत्ता डिजाइन गर्छ र कुनै अज्ञात कारणले र उसले कहिल्यै स्वीकार गर्दिनँ कि त्यो बरसातका दिनहरू बगैंचामा बियर पिउन र चकलेट खान खाई। मानौं कि ती दुवैले अन्य दायित्व वा जिम्मेवारी पाएका थिएनन्।
अलि अलि कथिको कथा अनभ्रेवल छ र दर्शकहरूले अन्य विवरणहरू पनि सिकेका छन्। युकिनोले उसलाई उसको नाम पनि भनेन जबकि टाकाओले उनका सबै सपनाहरू स्वीकार गर्दछन्। ती एकान्त र दु: खी व्यक्तिहरू, जसले ती सभाहरू र ती वार्ताको साथ बिस्तारै उनीहरूको स of्कटबाट बाहिर आउँदैछन्।
फिल्मको अन्ततिर, हामी जान्दछौं कि युकिनो वास्तवमै उही इन्स्टिच्युट ताकाओमा जापानका साहित्य शिक्षक हुन्, उनी उनलाई चिन्दैनन्, र उनलाई केही ईर्ष्यालु विद्यार्थीहरूसँग समस्या छ, त्यसैले गर्दा उसले यति नराम्रो महसुस गर्यो कि स्कूल जान बन्द गर्यो।
यो वर्षा भएको छ र तिनीहरूले युकिनोको अपार्टमेन्टमा खाजा साझेदारी गर्दा, पार्कबाट भाग्न बाध्य पार्ने प्रकोप पछि, टाकोओले उनको प्रेमको घोषणा गर्छन् तर युकिनोले लामो दूरी राख्छन् जसले केटोलाई चोट पुर्‍याउँछ र उसलाई चालीस वर्षको पछाडि भागेर भाग्छ। ओह, अन्त्य अद्भुत छ किनकि जब तपाई सोच्नुहुन्छ कि कुरा त्यहाँ समाप्त हुन्छ उनी पानीमा उनी पछि लाग्छिन्। मँ अधिक कुरा भन्न जाँदैछु किनकि म चाहन्न बिगार्नु तर ... यो नछुटाउ!
Shinjuku Gyo-en उद्यान
वर्ल्ड अफ वर्ड्सको प्राकृतिक सेटिंग टोकियो, शिन्जुुकुको यस भागको सुन्दर पार्क हो। अन्य समयमा, एक शताब्दी भन्दा पहिले, यो धनी नाइतो परिवारको बगैंचा थियो तर पछि यो शाही परिवारको हातमा लाग्यो र पछि सार्वजनिक भयो।
बगैंचाको लेआउट १th औं शताब्दीको उत्तरार्द्ध हो र एक शताब्दी पछि यो पनि एक वनस्पति उद्यान थियो। हालको लेआउट १ 1906 ०XNUMX बाट हो सन् १ 1945 .XNUMX मा अमेरिकीहरूको हवाई आक्रमणले यसलाई पूर्ण रूपमा ध्वस्त गर्यो र यसलाई पुन: निर्माण गर्नु पर्‍यो युद्ध पछि। थियो १ 1949। In मा यो शिनजुकु ग्य्यान, "शाही बगैंचा" को रूपमा जनताको लागि खोलियो।
यो बगैचा लगभग hect० हेक्टर क्षेत्र ओगटेको छ र 60. kilometers किलोमिटरको परिधि छ। तीन शैलीले यसलाई भिन्नता गर्दछ, एक लम्बाईका लागि त्यहाँ छ फ्रान्सेली बगैंचा क्षेत्र, अर्को जापानी र अर्को अंग्रेजी। यदि तपाइँ जापान जानुभयो भने हानमी, परम्परागत चेरी खिल, यो हेर्नको लागि यो एक राम्रो ठाउँ हो। जापानी क्षेत्र मा टापु र पुल र धेरै मंडपहरु संग ठूलो पोखरी छ। फ्रान्सेली र अ sectors्ग्रेजी क्षेत्रहरू अधिक खुला र जed्गली ठाउँहरू छन्।
बगैचा यसमा २० हजार रूख छन् र ती मध्ये आधा भन्दा बढी चेरी रूखहरू छन्, त्यहाँ हिमालय देवदाराहरू, साइप्रस र एक सुन्दर नर्सरी पनि छ जुन १ 50 s० को दशकदेखि डेटि। गरीएको छ र जुन करिब १1700०० उष्णकटिबंधीय र उपोष्णकटिबन्धीय प्रजातिहरूको घर छ। बगैचा भ्रमण गर्न अर्को राम्रो समय शरद inतुमा छ, रूखहरूको शेर, पहेंलो र रातोको लागि।
Shinjuku Gyoen भ्रमण गर्नुहोस्
केवल नकारात्मक यो हो कि यस बगैचा मेरो राय मा धेरै चाँडै बन्द हुन्छ: बेलुकी 4.30: .०। वसन्त वा ग्रीष्म daysतुमा त्यहाँ हिंड्नको लागि यो साह्रै नराम्रा छ कि उनीहरू किन खुल्ने समय विस्तार गर्दैनन् भनेर यो बुझ्दैन।
बगैचा यसका तीन प्रवेश द्वारहरू छन्, Okido, Shinjuku र सेंडागाया। शिन्जुकु गेट जेआर शिन्जुकुको नयाँ साउथ एक्जिटबाट १० मिनेट पैदल मात्र छ वा मारुनची सबवे लाइनमा सिन्जुकुग्योएन्मे स्टेशनबाट पाँच मिनेट। Okido गेट पनि यी स्टेशनहरु बाट पाँच मिनेट पैदल छ र सेंडागाया उही नामको स्टेशन बाट JR Chuo-Sobu लाइन बाट समान छ।
तपाईं बिहान from देखि प्रवेश गर्न सक्नुहुनेछ तर सोमबार जानु हुँदैन किनभने यो बन्द छ, मार्चको अन्त्य र अप्रिलको सुरुवात बीचमा, हनामीको लागि, र नोभेम्बरको सुरुमा जुन सम्पूर्ण हप्ता खुल्ला हुन्छ। नर्सरी पहिले बन्द हुन्छ, बेलुका at बजे।
पार्क बिहान9देखि साँझ :4: .० सम्म खुल्छ जे होस् प्रवेश4सम्म मात्र अनुमति छ। सोमबारमा बन्द छ वा अर्को दिन यदि सोमबार छुट्टी हो र डिसेम्बर २ to देखि जनवरी from सम्म। प्रवेशद्वार साह्रै सस्तो छ २०० येन जुन करिब २ डलर हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » टोकियो » शब्दहरु को बगैचा, टोकियो मा एक देख्नै पर्छ
चकलेट संग्रहालय, धेरै देशहरूमा क्लासिक
Wieliczka साल्ट खानी